Moat: refesio ny sain'ny mpanjifa manerana ny fantsona, fitaovana ary sehatra | Martech Zone
Moat: mandrefy ny sain'ny mpanjifa manoloana ireo fantsona, fitaovana ary sehatra
Alahady 14 Febroary 2021 Alahady 14 Febroary 2021 Douglas Karr
Moat by Oracle dia sehatra fanadihadiana sy fandrefesana feno izay manome vahaolana vahaolana amin'ny fanamarinana doka, famakafakana ny sain'ny olona, ​​ny fivezivezena eo amin'ny sehatra hafa ary ny fahita matetika, ny valin'ny ROI, ary ny marketing ary ny saina. Ny suite fandrefesana ataon'izy ireo dia misy ny vahaolana amin'ny fanamarinana doka, ny fiheverana, ny fiarovana ny marika, ny fahombiazan'ny dokam-barotra, ary ny haingam-pandeha sy ny fahita matetika.
Miat amin'ny mpanonta, marika, masoivoho ary sehatra, Moat dia manampy amin'ny mpanjifa ho avy, misarika ny sain'ny mpanjifa, ary mandrefy ny vokatra azo hanalana ny mety amin'ny orinasa. Moat avy amin'ny Oracle Data Cloud manome hery anao hiroso amin'ny vokatra tsara kokoa amin'ny orinasa.
Jereo ny fomba fijery miray amin'ireo fantsona haino aman-jery
Fantaro ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao
Fantaro hoe inona ny fampahalalam-baovao manosika ny fanaovana firaisana
Jereo ny famoronana manintona ny sain'ny mpijery
Ianaro izay endrika mety indrindra amin'ny orinasao, amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana indostrialy
Fantaro raha mahatratra ny mpihaino mety amin'ny refy marina ianao
Topimaso momba ny vahaolana amin'ny moat
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny doka ny famaritana ny fako, manomboka amin'ny doka alefa amin'ireo mpihaino tsy tratra kendrena na dokambarotra mamely ny mpijery azy matetika loatra.
Moat Analytics mitondra vokatra ara-barotra tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanamarinana marina sy ny fandrefesana ny saina izay manamafy ny paikadin'ny media nomerika.
Fandraisana anjara amin'ny molotra manambatra ny haavo sy ny fahita matetika amin'ny haavon'ny mpihaino hahazoana fomba fijery miampita ifotony ny olona tratranao amin'ny dokambarotrao sy ny toerana misy anao.
Vokatry ny moats manome fomba fijery tena izy amin'ny fahombiazan'ny doka hahafahanao mandray fanapahan-kevitra feno fahendrena momba ny fandanianao doka.
hady Pro dia fitaovam-pitsikilovana mifaninana izay manome fijerena anatiny ny dokambarotra mivantana sy programa novidiana tamin'ny marika. Miaraka amin'ny fahitana efa hatramin'ny telo taona lasa izay eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, azonao atao ny mikaroka, mampitaha ary manara-maso ny fampielezan-kevitra rehefa mandeha ny fotoana hahalalanao ny fomba hametrahan'ny paikadinao amin'ireo mpifaninana aminao.
Tao amin'ny 2017, Oracle dia nanampy an'i Moat ho an'ny vahaolana teknolojia dokambarotra mahery vaika. Oracle dia manome angon-drakitra sy teknolojia hahatakarana sy hahatongavana bebe kokoa amin'ny mpihaino anao, hampitombo ny fifandraisanao ary handrefesana azy rehetra amin'ny Moat.
Makà Demo Moat
Momba ny dokambarotra Oracle
Ny Oracle Advertising dia manampy ny mpivarotra hampiasa angona hisarihana ny sain'ny mpanjifa sy hitondra ny valiny. Nampiasain'ny 199 tamin'ny mpanao dokambarotra lehibe indrindra an'ny AdAge miisa 200, ny vahaolana Audiens, Context ary ny fandrefesana dia miitatra amin'ireo sehatra haino aman-jery ambony sy dian-tongotra manerantany misy firenena 100 mahery. Omentsika ny mpivarotra ny angona sy ny fitaovana ilaina amin'ny dingana rehetra amin'ny dia marketing, manomboka amin'ny drafitry ny mpihaino ka hatrany amin'ny fiarovana ny marika alohan'ny tolotra, ny fifandraisan'ny fifandraisana, ny fanamafisana ny fahitana, ny fiarovana ny hosoka ary ny fandrefesana ROI. Oracle Advertising dia manambatra ny teknolojia sy talenta mitarika amin'ny fahazoan'i Oracle AddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, ary Moat.
Momba ny Oracle
Oracle dia manolotra efitrano fampiharana misy rindrambaiko miampy fotodrafitrasa azo antoka sy mahaleo tena ao amin'ny Oracle Cloud.
Tags: fitsikilovana dokamandany dokafanamarinana ny fandaniana dokafanamarinana dokaadtechfiarovana ny marikaanalytics an-tseraserahaavo ampitan-tsivalanalakroaorinasaanalytics momba ny doka orinasafandrefesana ny fandaniana dokahadyanalytics moatvalin'ny moatmoat profihomboanaomnichannelOraclerahona data oracledoka amin'ny fahita lavitra
Karazana karazana: Avereno ho lasa traikefa maha-olombelona ny fanangonana data